Run Box ထဲမှာ ရိုက်လို့ရတဲ့ Command များ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Run Box ထဲမှာ ရိုက်လို့ရတဲ့ Command များ
Accessibility Controlsâ€”â€”- access.cpl
Add Hardware Wizardâ€”â€”- hdwwiz.cpl
Add/Remove Programsâ€”â€”- appwiz.cpl
Administrative Toolsâ€”â€”- control admintools
Automatic Updatesâ€”â€”- wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizardâ€”â€”- fsquirt
Check Disk Utilityâ€”â€”- chkdsk
Clipboard Viewerâ€”â€”- clipbrd
Command Promptâ€”â€”- cmd
Component Servicesâ€”â€”- dcomcnfg
Computer Managementâ€”â€”- compmgmt.msc
Device Managerâ€”â€”- devmgmt.msc
Direct X Control Panel (If Installed)*â€”â€”- directx.cpl
Direct X Troubleshooterâ€”â€”- dxdiag
Disk Cleanup Utilityâ€”â€”- cleanmgr
Disk Defragmentâ€”â€”- dfrg.msc
Disk Managementâ€”â€”- diskmgmt.msc
Disk Partition Managerâ€”â€”- diskpart
Display Propertiesâ€”â€”- control desktop
Display Propertiesâ€”â€”- desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)â€”â€”- control color
Dr. Watson System Troubleshooting Utilityâ€”â€”- drwtsn32
Driver Verifier Utilityâ€”â€”- verifier
Event Viewerâ€”â€”- eventvwr.msc
File Signature Verification Toolâ€”â€”- sigverif
Folders Propertiesâ€”â€”- control folders
Fontsâ€”â€”- control fonts
Fonts Folderâ€”â€”- fonts
Game Controllersâ€”â€”- joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof)â€”â€”- gpedit.msc
Hearts Card Gameâ€”â€”- mshearts
Iexpress Wizardâ€”â€”- iexpress
Indexing Serviceâ€”â€”- ciadv.msc
Internet Propertiesâ€”â€”- inetcpl.cpl
IP Configuration (Display Connection Configuration)â€”â€”- ipconfig /all
IP Configuration (Display DNS Cache Contents)â€”â€”- ipconfig /displaydns
IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)â€”â€”- ipconfig /flushdns
IP Configuration (Release All Connections)â€”â€”- ipconfig /release
IP Configuration (Renew All Connections)â€”â€”- ipconfig /renew
IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS)â€”â€”- ipconfig /registerdns
IP Configuration (Display DHCP Class ID)â€”â€”- ipconfig /showclassid
IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)â€”â€”- ipconfig /setclassid
Java Control Panel (If Installed)â€”â€”- javaws
Keyboard Propertiesâ€”â€”- control keyboard
Local Security Settingsâ€”â€”- secpol.msc
Local Users and Groupsâ€”â€”- lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windowsâ€”â€”- logoff
Microsoft Chatâ€”â€”- winchat
Minesweeper Gameâ€”â€”- winmine
Mouse Propertiesâ€”â€”- control mouse
Mouse Propertiesâ€”â€”- main.cpl
Network Connectionsâ€”â€”- control netconnections
Network Connectionsâ€”â€”- ncpa.cpl
Network Setup Wizardâ€”â€”- netsetup.cpl
Nview Desktop Manager (If Installed)â€”â€”- nvtuicpl.cpl
Object Packagerâ€”â€”- packager
ODBC Data Source Administratorâ€”â€”- odbccp32.cpl
On Screen Keyboardâ€”â€”- osk
Opens AC3 Filter (If Installed)â€”â€”- ac3filter.cpl
Password Propertiesâ€”â€”- password.cpl
Performance Monitorâ€”â€” perfmon.msc
Performance Monitorâ€”â€”- perfmon
Phone and Modem Optionsâ€”â€”- telephon.cpl
Power Configurationâ€”â€”- powercfg.cpl
Printers and Faxesâ€”â€”- control printers
Printers Folderâ€”â€”- printers
Private Character Editorâ€”â€”- eudcedit
Quicktime (If Installed)â€”â€”- QuickTime.cpl
Regional Settingsâ€”â€”- intl.cpl
Registry Editorâ€”â€”- regedit
Registry Editorâ€”â€”- regedit32
Remote Desktopâ€”â€”- mstsc
Removable Storageâ€”â€”- ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requestsâ€”â€”- ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof)â€”â€”- rsop.msc
Scanners and Camerasâ€”â€”- sticpl.cpl
Scheduled Tasksâ€”â€”- control schedtasks
Security Centerâ€”â€”- wscui.cpl
Shared Foldersâ€”â€”- fsmgmt.msc
Shuts Down Windowsâ€”â€”- shutdown
Sounds and Audioâ€”â€”- mmsys.cpl
Spider Solitare Card Gameâ€”â€”- spider
SQL Client Configurationâ€”â€”- cliconfg
System Configuration Editorâ€”â€”- sysedit
System Configuration Utilityâ€”â€”- msconfig
System File Checker Utility (Scan Immediately)â€”â€”- sfc /scannow
System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot)â€”â€”- sfc /scanonce
System File Checker Utility (Scan On Every Boot)â€”â€”- sfc /scanboot
System File Checker Utility (Return to Default Setting)â€”â€”- sfc /revert
System File Checker Utility (Purge File Cache)â€”â€”- sfc /purgecache
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x)â€”â€”- sfc /cachesize=x
System Propertiesâ€”â€”- sysdm.cpl
Task Managerâ€”â€”- taskmgr
Telnet Clientâ€”â€”- telnet
User Account Managementâ€”â€”- nusrmgr.cpl
Utility Managerâ€”â€”- utilman
Windows Firewallâ€”â€”- firewall.cpl
Windows Magnifierâ€”â€”- magnify
Windows Management Infrastructureâ€”â€”- wmimgmt.msc
Accessibility Controls â€”â€”â€” access.cpl
Accessibility Wizard â€”â€”â€” accwiz
Add Hardware Wizard â€”â€”â€” hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs â€”â€”â€” appwiz.cpl
Administrative Tools â€”â€”â€” control admintools
Adobe Acrobat (if installed) â€”â€”â€” acrobat
Adobe Designer (if installed) â€”â€”â€” acrodist
Adobe Distiller (if installed) â€”â€”â€” acrodist
Adobe ImageReady (if installed) â€”â€”â€” imageready
Adobe Photoshop (if installed) â€”â€”â€” photoshop
Automatic Updates â€”â€”â€” wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizard â€”â€”â€” fsquirt
Calculator â€”â€”â€” calc
Certificate Manager â€”â€”â€” certmgr.msc
Character Map â€”â€”â€” Charmap
Check Disk Utility â€”â€”â€” chkdsk
Clipboard Viewer â€”â€”â€” clipbrd
Command Prompt â€”â€”â€” cmd
Component Services â€”â€”â€” dcomcnfg
Computer Management â€”â€”â€” compmgmt.msc
Control Panel â€”â€”â€” control
Date and Time Properties â€”â€”â€” timedate.cpl
DDE Shares â€”â€”â€” ddeshare
Device Manager â€”â€”â€” devmgmt.msc
Direct X Control Panel (If Installed)* â€”â€”â€” directx.cpl
Direct X Troubleshooter â€”â€”â€” dxdiag
Disk Cleanup Utility â€”â€”â€” cleanmgr
Disk Defragment â€”â€”- dfrg.msc
Disk Management â€”â€”â€“ diskmgmt.msc
Disk Partition Manager â€”â€”â€” diskpart
Display Properties â€”â€”â€”â€“ control desktop
Display Properties â€”â€”â€”-Desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) â€”â€”â€” control color
Dr. Watson System Troubleshooting Utility â€”â€”â€”â€” drwtsn32
Driver Verifier Utility â€”â€”â€”â€” verifier
Minesweeper Game â€”â€”â€“ winmine
Mouse Properties â€”â€”â€” control mouse
Mouse Properties â€”â€”â€”- main.cpl
Nero (if installed) â€”â€”â€” nero
Netmeeting â€”â€”â€”â€”- conf
Network Connections â€”â€”â€”- control netconnections
Network Connections â€”â€”â€” ncpa.cpl
Network Setup Wizard â€”â€”â€”- netsetup.cpl
Notepad â€”â€”â€” notepad
Nview Desktop Manager (If Installed) â€”â€”- nvtuicpl.cpl
Object Packager â€”â€”â€”- packager
ODBC Data Source Administrator â€”â€” odbccp32.cpl
On Screen Keyboard â€”â€”â€” osk
Opens AC3 Filter (If Installed) â€”â€”â€” ac3filter.cpl
Outlook Express â€”â€”â€”â€”- msimn
Paint â€”â€”â€”â€” pbrush
Password Properties â€”â€”â€“ password.cpl
Performance Monitor â€”â€”- perfmon.msc
Performance Monitor â€”â€”â€” perfmon
Phone and Modem Options â€”â€”- telephon.cpl
Phone Dialer â€”â€”â€” dialer
Pinball Game â€”â€”â€”â€”â€” pinball
Power Configuration â€”â€”â€” powercfg.cpl
Printers and Faxes â€”â€”- control printers
Printers Folder â€”â€”â€” printers
Private Character Editor â€”â€”â€” eudcedit
Quicktime (If Installed) â€”â€”â€” QuickTime.cpl
Quicktime Player (if installed) â€”â€”â€”â€”- quicktimeplayer
Real Player (if installed) â€”â€”â€”â€”- realplay
Regional Settings â€”â€”â€”â€“ intl.cpl
Registry Editor â€”â€”â€” regedit
Registry Editor â€”â€”â€“ regedit32
Remote Access Phonebook â€”â€”â€“ rasphone
Remote Desktop â€”â€”â€” mstsc
Removable Storage â€”â€”â€” ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests â€”â€”â€” ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof) â€”â€”â€”- rsop.msc
Scanners and Cameras â€”â€”â€”â€” sticpl.cpl
Scheduled Tasks â€”â€”â€”â€“ control schedtasks
Security Center â€”â€”â€”â€“ wscui.cpl
Services â€”â€”â€”â€”â€“ services.msc
Shared Folders â€”â€”â€”â€“ fsmgmt.msc
Shuts Down Windows â€”â€”- shutdown
Sounds and Audio â€”â€”â€”â€” mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game â€”â€”â€“ spider
SQL Client Configuration â€”â€”â€” cliconfg
System Configuration Editor â€”â€”â€” sysedit
System Configuration Utility â€”â€”â€” msconfig
System File Checker Utility (Scan Immediately) â€”â€”â€”- sfc /scannow
System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) â€”â€”â€”- sfc /scanonce
System File Checker Utility (Scan On Every Boot) â€”â€”â€”â€”â€“ sfc /scanboot
System File Checker Utility (Return to Default Setting) â€”â€”â€”â€“ sfc /revert
System File Checker Utility (Purge File Cache) â€”â€”â€”â€” sfc /purgecache
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) â€”â€”â€”â€” sfc /cachesize=x
System Information â€”â€”â€”â€“ msinfo32
System Properties â€”â€”â€” sysdm.cpl
Task Manager â€”â€”â€”â€” taskmgr
TCP Tester â€”â€”â€”â€” tcptest
Telnet Client â€”â€”â€” telnet
Tweak UI (if installed) â€”â€”â€”â€” tweakui
User Account Management â€”â€”â€”â€” nusrmgr.cpl
Utility Manager â€”â€”â€” utilman
Windows Address Book â€”â€”â€” wab
Windows Address Book Import Utility â€”â€”â€”â€“ wabmig
Windows Backup Utility (if installed) â€”â€”â€”â€” ntbackup
Windows Explorer â€”â€”â€”â€”- explorer
Windows Firewall â€”â€”â€”- firewall.cpl
Windows Magnifier â€”â€”â€”â€”- magnify
Windows Management Infrastructure â€”â€”â€”â€“ wmimgmt.msc
Windows Media Player â€”â€”â€”â€“ wmplayer
Windows Messenger â€”â€”â€”â€” msmsgs
Windows Picture Import Wizard (need camera connected) â€”â€”â€” wiaacmgr
Windows System Security Tool â€”â€”- syskey
Windows Update Launches â€”â€”â€”â€”â€“ wupdmgr
Windows Version (to show which version of windows) â€”â€”â€” winver
Windows XP Tour Wizard â€”â€”â€”â€”- tourstart
Event Viewer â€”â€”â€”â€“ eventvwr.msc
Files and Settings Transfer Tool â€”â€”â€”- migwiz
File Signature Verification Tool â€”â€”â€“ sigverif
Findfast â€”â€”â€”- findfast.cpl
Firefox (if installed) â€”â€”â€“ firefox
Folders Properties â€”â€”â€”- control folders
Fonts â€”â€”â€”- control fonts
Fonts Folder â€”â€”â€”â€” fonts
Free Cell Card Game â€”â€”- freecell
Game Controllers â€”â€”â€” joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof) â€”â€”â€” gpedit.msc
Hearts Card Game â€”â€”â€”â€“ mshearts
Help and Support â€”â€”- helpctr
အောက်ပါအသင်းဝင် 43 ဦးတို့မှ Zeiya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကာကာ, ခင်ကေသာ, ခရေ, ချစ်သားငယ်လေး, စစ်တွေသားချေ, မင်းကို၁၃၄၈, မင်းကိုထွေး, မနက်ဖြန်, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရန်မျိုးအောင်, ရဲထက်သာ, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, ဟိန်းသက်အောင်, အိမ့်ဖြူ, ဇော်ရဲပိုင်, မေထူးမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ဧက, မြှားနတ်မောင်၅၂၈, ကြက်ရိုး, နိုးတူး, azp09, blackNwhite, kktth, kooo333, KZaw, LaMike, laylwintthu2599, linthuraaung, lotaya, minthumon, moewin, myatmin86, naychiyoon, phyothida, Starfire, thurein, thureinsoe, Venom, zerno, zin min aung
ပို့စ် 36 ခုအတွက် 170 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Re: Run Box ထဲမှာ ရိုက်လို့ရတဲ့ Command များ
ဒါကတော့ shutdown နဲ့ပတ်သက်တာလေးပါ
Last edited by ရဲဒင်; 11-05-2007 at 02:39 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ ရဲဒင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စက်တင်ဘာ, မင်းကိုထွေး, မနက်ဖြန်, ရန်မျိုးအောင်, လူမုန်း, အိုက်ထွန်း, မေထူးမောင်, blackNwhite, kktth, LaMike, phyothida, Starfire, thurein, thureinsoe, zin min aung
Find More Posts by ရဲဒင်
ကိုရဲဇေယျရှိန် နဲ့ ကို geishakiller တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
ကျွန်တော်လည်း ကိုရဲဇေယျရှိန် နဲ့ ကို geishakiller တို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ..
အင်း အလွတ်ကျက်ထားရဖို့ .. ခက်ရချည်သေးရဲ့...
အေးဗျာ ..တော်တော်စုံပါတယ် ..
ကျွန်တော့်ဆီမှာ.. ဟိုအရင်က မြန်မာ့သွေးဂျာနယ်က လုပ်ထားတဲ့
ရှာပြီးတင်ပေးမယ်ဗျာ ..တော်တော် စုံပါတယ်..
မြန်မာ့သွေးဂျာနယ်ကနေရခဲ့ဖူးတဲ့ Run Command လေးတွေပါ ..
pdf ဖိုင်လေးနဲ့ပေါ့ ..အဆင်ပြေပါတယ် ..တော်တော်များများပေါ့ ..
ကျွန်တော့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ဆွေးနွေးတင်ပြထားတဲ့ .. Command တွေကလည်းကောင်းပါတယ်။
ပြည့်စုံသွားအောင်လို့ရယ် ပြီးတော့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ရယ် ပီဒီအက်ဖ်လေးနဲ့ တင်ပေးလိုက်
တာပါ .. မီဒီယာဖိုင်းယားက ကျနေလို့ အဆင်ပြေတာနဲ့တင်ပေးလိုက်တာပါ
100 Run Command
kktth, phyothida, zin min aung
တင်ပေးလိုက်တဲ့ pdf လေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
အဲဒီ Shortcut တွေရော တခြားအသုံးဝင်တဲ့ Shortcut တွေရော အလွယ်ရနိုင်တဲ့ နည်းတစ်ခုရှိသေးတယ် ခင်ဗျ...
Start --> Help and Support Center ကို Click လုပ်
ပေါ်လာတဲ့ Search box မှာ Keyboard Shortcuts ဆိုပြီးရိုက်ထည့် --> Enter ခေါက်ရင်
ပေါ်လာတဲ့ Search Results 21 ခုမှာ အထူးသဖြင့် Overviews, Articles & Tutorials ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အခု pdf ထဲက Shortcuts အားလုံးအပြင် အခြား Shortcut တွေပါ တစုတစည်းတည်း တွေ့ရမှာပါ...
အခုပြောခဲ့တာလေးတွေက အများစု သိပြီးသားတွေလည်း ဖြစ်မှာပါ...
တကယ်တော့ Help and Support Center ကနေ Windows OS သုံးနည်းတွေကို ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ ရပါတယ်...
English-Myanmar Dictionary ရယ်, Computer Dictionary ရယ်တော့ လိုမှာပေါ့ဗျာ...
အားလုံးပဲ ပညာဗဟုသုတ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေဗျာ...:)
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မင်းကိုထွေး, ရန်မျိုးအောင်, လူမုန်း, ဇော်ရဲပိုင်, မေထူးမောင်, blackNwhite, kktth, LaMike, Ma Ei, phyothida, sAnDViper, thurein, viva, zin min aung
Run Box ထဲမှာ နောက်ထပ်ရိုက်လို့ရတဲ့ Command လေးတွေပါ
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးမှာ Environment Variables လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်
ကွန်ပျုတာကို သုံးနေတဲ့သူ အားလုံးရဲ့ Profile တွေရှိနေတဲ့ နေရာကို ပြပေးပါတယ်။
အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ သိမ်းထားတဲ့ နေရာပါ။
Command shell တကယ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာ။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive နေရာ။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive လမ်းကြောင်း။
လက်ရှိဝင်သုံးနေတဲ့သူရဲ့ Domain Controller
ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ နေရာ
၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Directory
၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Root Directory
%tmp% သို့မဟုတ် %temp%
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အလုပ်လုပ်လက်စ ဖိုင်တွေရှိရာနေရာ
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Domain အမည်
လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူရဲ့ Profile ရှိရာနေရာ
OS တင်ထားတဲ့ နေရာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မင်းကိုထွေး, ရန်မျိုးအောင်, ရန်ရန်လင်း, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, ကောင်းညီမလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မေထူးမောင်, မောင်သံသရာ, blackNwhite, kktth, KZaw, LaMike, phyothida, sAnDViper, thureinsoe, yemin7, zin min aung
run command အတွက် အသုံးဝင် မယ်ထင်တဲ့ command လေးတွေပါ။
အကုန်လုံး တစုတစည်းတည်း ဖြစ်သွားအောင် ကိုဇေယျဖွင့်ထားတဲ့ တော့ပစ်ထဲ ပြောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Last edited by Aung Aung; 04-05-2008 at 08:21 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ baytar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကာကာ, ခရေ, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရန်မျိုးအောင်, သက်နိုင်, မေထူးမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ဧက, ကြက်ရိုး, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, blackNwhite, kktth, yemin7, zin min aung
Find More Posts by baytar
commands of computer
NOTE: If you interest to use this command ,you must be done as like this step.First go to the ‘run’,in this box you must be written ‘cmd’.You will see command box .In this box you write this command .Only not know computer command ………………………………………….Try it.We will get.
သုံးနည်းလေးပါ………..ပထမဆုံး”run box”ကို ဖွင့် ရမှာပါ။window key နဲ့ R ကို တွဲ နှိပ် ပါ။”Run box” ကျ လာပါ မယ်။အဲဒီ”Run box” မှာ “cmd”လို့ရိုက် ပါ။ “command box”လေးကျ လာ ပါ မယ်။အဲဒီ “box” လေးမှာ ဒီ “command”တွေကို ရိုက် ပြီးသုံးကြည့် ပါ။သိ ပြီးသူများကို မရည်ရွယ်ပါဘူး…….
I refer from this book “LIST OF MS-DOS COMMANDS’’.
“ Thank for reading “
Written by ကရင် လေး(3 May 2008)
(အကြောင်းအရာ တူနေလို့ thread နှစ်ခုကို ဒီမှာလာပေါင်းလိုက်ပါတယ်။)
Last edited by tu tu; 04-05-2008 at 06:06 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ kayinlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကာကာ, ခရေ, ထွန်းဝင်းနိုင်, ရန်မျိုးအောင်, သက်နိုင်, အိုက်ထွန်း, မောင်သံသရာ, လေပြေညင်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, နှင်းဆီနီ, blackNwhite, kktth, kwarsi, LaMike, waterpeople, yemin7, zin min aung
ပြန်စာ - run command
ကောင်းတယ် ကိုကရင်လေးေ၇။ ဖိုရမ်လေးကို အခုလို ကူညီတဲ့အတွက်။ အားပေးတယ်ဗျာ ဖိုရမ်လေးကို ဒီထက့်မက ကူညီနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
ပြန်စာ - Run Box ထဲမှာ ရိုက်လို့ရတဲ့ Command များ
ဟဲဟဲ akaris ပြောသလိုပါပဲ .......အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
တာတာသိချင်တာလေး တွေ သိလိုက်ရပြီ သူငယ်ချင်းတွေ သွားကြွားလိုက်ဦးမယ်............“
အခုမှ ပဲစုံစုံ လင်လင်သိတော့တယ်။ cmd command code လေးတွေလည်း ရေးပေးကြပါလားဗျာ..........
ပြီးတော့ cmd command တွေက ဘယ်နေရာမှာ သုံးရတာ ပိုကောင်းတယ် ဆိုတာတွေရောပေါ့။
18-06-2008, 01:55 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ hanthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - Keyboard Shortcuts လေးတွေပါ
Originally Posted by ရဲထွတ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့၊ run menu shortcuts များရှိရင်လည်းချီမြှင့်ပေးပါအုံး
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ akaris အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကာကာ, ခင်မေခ, ရန်မျိုးအောင်, ရဲထက်သာ, အိုက်ထွန်း, မေထူးမောင်, မောင်သံသရာ, blackNwhite, kktth, KZaw, LaMike, youngman47, zin min aung
ဒါလေးတွေလည်း Run Box မှာရိုက်ရတဲ့ Shortcuts လေးတွေပါ...
Last edited by akaris; 03-07-2008 at 02:25 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ akaris အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကာကာ, ခင်မေခ, ထွန်းဝင်းနိုင်, ရဲထက်သာ, မောင်သံသရာ, blackNwhite, kktth, LaMike, youngman47, zin min aung
ပို့စ် 49 ခုအတွက် 77 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
window vista မှာ accessibility control( access.cpl) ရိုက်တာမပေါ်ဘူးဗျာ... control panel ထဲ မှာ လည်း မတွေ့ ဘူးး...ဘယ်မှာ ရှာ ရမလဲ မသိဘူးဗျာ.. သိရင် ပြောကြပါအုံး...
the things which arise from the causes
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ jurassic အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အခုမှပဲ စုံစုံလင်လင် သိရတော့တယ်...........အခုလို ကိုယ်သိသမျှလေးတွေကို
မျှဝေပေးကြတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူး(အထူး) တင်ပါတယ်.....အားလုံးတော့
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyawmin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-07-2008, 07:52 PM
ဒါကတော့ LAN နဲ့အသုံးပြုနေသူများအတွက်ပါ...
folder ကို hidden နဲ့ share ပေးတာတွေကိုဖော်တဲ့နေရာမှာ သုံးတာပါ....
(share ပေးမဲ့သူနဲ အဲဒီ share folder ကိုယူမဲ့သူတွေပဲသိစေချင်တဲ့အခါမှာသုံး
တာပါ ) ... share ကိုလက်ခံမဲ့သူက shared ထားတဲ့ folder ရဲ့ name နဲ IP address ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်....အဲဒီလိုသိမှ run မှာ hidden နဲ့ shared ထားတဲ့ folderကိုခေါ် ယူလို့ရမှာပါ...
Window+R>\_\_IP address\_folder name$
မသိသေးသူတွေကိုပဲ ပြောတာနော်....သိပြီးသားဆိုရင်လည်း ...ဟီး..ဟီး ....sorry နော်..
ဒါလေးသိလို ၀င်ပြောတာပါ....(သိတာလည်း ဒါပဲရှိတယ်)
ကျွန်တော်ပြောတာ အမှားပါသွားရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ....အမှန်ကိုပြင်ပေးကြပါ....
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ kyawmin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကာကာ, အိုက်ထွန်း, မောင်သံသရာ, blackNwhite, kktth, LaMike
ပို့စ် 69 ခုအတွက် 197 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
သားသား လည်းမေးစရာ ရှိလို့ပါ။ ပေါက်တီးပေါက်ရှာမေးတယ် လို့တော့မထင်ကြပါနဲ့နော်။
Recycle Bin ကို Run Box က နေ ဖွင့်လို့ရပါသလားဗျာ။
ရတယ်ဆို ရင်သားကို ပြောပြ ပါလားဗျာ။ သားရှာနေတာ ကြာနေပြီ မတွေ့လို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ htunlinaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by htunlinaung
အောက်ကပေးထားသော Link ကတော့ Run Box မှာ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အမိန့်ပေးခိုင်းစေလို့ရတဲ့ key တွေပါ။ ဖော်ပြထားတဲ့ ဇယားထဲက ပထမကော်လံမှာဖော်ပြထားသော စာသားတွေဟာ Run Box မှာရိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး "အလယ်စာသား"တွေက အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်မှာ ရှိတာကတော့ ဆီလျော်အောင်ဘာသာမှု (အသုံးချ Program များကိုဖော်ပြပေးပါတယ်)တွေဖြစ်ပါတယ်။
Last edited by poekaunglay87; 06-08-2008 at 12:26 AM..
ခင်မေခ, ရဲထက်သာ, မောင်သံသရာ
ပို့စ် 91 ခုအတွက် 171 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by geishakiller
ပြန်ရှင်းပြ ပါဦး ခင်ဗျာ
အဲဒါက အခြားစက် ကို shutdown ချတာလား ခင် ဗျာ
မရလို့ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာ ကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ ... ကျေးဇူးတင်လျက်
[SIZE="4"][COLOR="Blue"]အမြင့်ရောက်လို့ အမြင်ကျယ်တာထက်၊ အမြင်ကျယ်လို့ အမြင့်ရောက်တာက ပိုကောင်းတယ်။[/COLOR][/SIZE]
Last edited by tu tu; 29-08-2008 at 05:45 AM.. Reason: Quote ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyawlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kyawlay
29-08-2008, 05:46 AM
အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်လိုက်ပါ ကို kyawlay ရေ...
မောင်သံသရာ, kktth, zin min aung
Originally Posted by htunlinaung
- folder တစ်ခုကို ဖွင့် tool menu >option > view tab ကို သွား show hidden files and folders ကိုရွေးပြီး ok လုပ်
- run box တွင် sysdm.cpl ကိုရိုက် enter ဒါဆိုရင် system properties ကျလာမည်
advance tab > Environment Variables ကိုကလစ် system variables အောက်က path ကို select လုပ် edit ကိုကလစ် Variable value ရဲ့ နောက်ဆုံတွင် ;c: လို့ ရိုက်ပြီး ok တွေနဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါ
ဒါဆိုရင် runbox တွင် recycler လို့ ရိုက်တာနဲ့recycle bin ကို တွေ့့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ
- ကိုယ်ကြိုက်ရာနေရာမှာ folder တစ်ခုဆောက် recycle bin ကို အဲဒီ folder ထဲမှာ shortcut လုပ် (recycle bin တည်နေရာက c ထဲမှာပါ default hidden ဖြစ်နေလို့ ပါ show လိုက်ရင် recycler ဆြိုပီးတွေ့ ပါလိမ့်မယ် )
- ပြီးရင် Environment variables ထဲမှာ ကိုယ်ဆောက်ခဲ့တဲ့ folder path ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ (သတိထားရမှာက variable value ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဆီမီးကော်လံ ( ; ) ခြံပီးမှ ကိုယ်ဆောက်ခဲ့တဲ့ folder path ကို ထည့်ရမှာပါ)
ဒါဆိုရင် ဆောက်ခံတဲ့ folder ထဲက short cut တွေအားလုံးကို run box ထဲကနေ ဖွင့်လို့ ရပါတယ် (အဲဒီ folder ထဲမှာ မိမိဖွင့်ချင်တဲ့ folders / files / exe /စတာတွေ အားလုံးကို short cut သာလုပ်ထားလိုက်ပါ)အားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့runbox ကနေ ဖွင့်လို့ ရပါတယ်
ဒီလို့ လုပ်နည်းလေးတွေကိုလည်း ဒြီမန်မာမိသားစု ဖိုဒမ်ကနေဘဲ ကျနော်ရရှိခဲ့တာပါ
ကျန်တာတွေကိုတော့ ကိုယ်စိတ်ကူးရှိသလို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လို့ ရပါပြီခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ kozaw.dagon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကာကာ, ခင်မေခ, ထွန်းဝင်းနိုင်, မောင်သံသရာ, blackNwhite, kktth, Ma Ei
26-09-2008, 05:23 PM
ပို့စ် 49 ခုအတွက် 218 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အားပါး စုံမှစုံပဲ ဗျို့ တင်ပေးတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။ အားလုံးစမ်းဖို့နဲ့ အလွတ်ရဖို့ပဲလိုတယ် အခုတော့ ကူးထားလိုက်ဦးမယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Zaw Min Han အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Zaw Min Han ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Zaw Min Han
27-09-2008, 09:53 PM
အားလုံး ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်....ကျွန်တော်ကဘာကိုဘာမှမသိသေးလို့လေ...တစ်ကယ်ပဲ ၀မ်းသာပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ heinmgmghtwe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by heinmgmghtwe
28-09-2008, 06:25 PM
Run Box ထဲမှာ ရိုက်လို့ရတဲ့ Command တွေသိတော့သိတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Mr.MK အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Mr.MK
29-09-2008, 03:19 AM
တည်နေရာ: သူနဲ့ အဝေး
ပို့စ် 25 ခုအတွက် 121 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
(.) ဒါလေးကိုလဲ Run Box မှာရိုက်ကြည့် ပါဦး C:/Documents and Settingsကိုတန်းရောက်သွားမှာပါ (Dot) လေးနော်ကွင်းစကွင်းပိတ်မပါဘူးနော်
Last edited by မောင်ကောင်းထက်; 29-11-2008 at 03:19 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မောင်ကောင်းထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသက်အောင်, မောင်သံသရာ, kktth, minthumon
Visit မောင်ကောင်းထက်'s homepage!
Find More Posts by မောင်ကောင်းထက်
Gmail အကြောင်းသိကောင်းစရာ အကြော်ဆရာ Chat software များဆိုင်ရာ 117 09-07-2016 10:06 PM
Folder ထဲမှာ ပုံလေးတွေထည့်ကြရအောင် ရဲဒင် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 52 13-02-2014 02:36 PM